လက်ဆောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » လက်ဆောင်	13
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Sep 19, 2015 in Arts & Humanities | 13 comments
မရောက်တာကြာနေတဲ့ ရွာ့အတွက် လက်ဆောင်ပါဗျာ…။
မှတ်ချက်။ ။ မည်သူမဆို ကောင်းသောစိတ်စေတနာဖြင့် အမေ့ပုံကို အသုံးပြုနိုင်ရန် ခွင့်ပြုပါတယ်..။
မကောင်းစိတ်နဲ့ အသုံးပြုခဲ့လျှင် ဘဝဆက်တိုင်း ခွင့်မလွှတ်ပါ..။
kai says: မင်္ဂလာပါဗျာ..
မြစပဲရိုး says: .ကျေးဇူးပါ ပန်းချီဆရာ။
မျက်လုံးလေးတွေ က တကယ် အသက်ဝင်နေတာ ရော။
မြစပဲရိုး says: လူတစ်ဖွဲ့ တစ်စု လူတန်းစား တစ်ရပ် ထဲက မဟုတ်ဘဲ
လူတန်းစား စုံက လူတွေ ဒီလောက် ဝုန်းဝုန်းထပြီး ချစ်ပြနေတာ ကို မြင်ရင်
အဲဒီလို ချစ်နေသူတွေ ကို အပြစ်တင် စိတ်ထားမဲ့အစား
ဘာလို့ ဒီလို ဖြစ်ပါလိမ့်/ ဘာလို့ ဒီလို ချစ်ကြပါလိမ့် လို့ ဆင်ခြင်ကြည့်တာက
ပိုပြီး ယထာဘူတကျ ပါလိမ့်မယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အများး ချစ်လို့ ကို မချစ်ဘူးး ဆိုတဲ့ လူ့ကန့်လန့်တွေ အများးကြီးး ရှိသဗျာ..
ဒေါ်စု ကြောင့် ရတဲ့ ကောင်းးကျိုးးချမ်းးသာမျိုးးတောင် အများးခံစားးစံစားးလို့ ငါ မယူမခံစားးဘူးး ဆိုပြီးးး ကန့်လန့် လုပ်မလားးမသိ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12395
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခေါင်ရေ,
မေစု ပုံ က ၂ ပုံ လားးး
အရင် က ဆွဲထားးတဲ့ မွေးးနေ့ လက်ဆောင် ပုံလေးးရော ပြန်တင်ကါ့ လားးး
အဲဒီပုံ က ခဲခြစ်ထင်တယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
@QUIL@ says: ဘိုခင်ညွန့် ပုံလည်းဆွဲဇီချင်သဗျ…
နှုတ်ခမ်းက မမဲ့ဘဲ စိတ်ကမဲ့ထားကြောင်း မျက်လုံးတွေက သက်သေခံတဲ့ ပုံမျိုးလေ….။
kai says: နှုတ်ခမ်းမဲ့ထားတဲ့.. ဦးသန်းရွှေပုံကြီးက.. ပိုအသက်ဝင်မယ်ထင်တာပဲ…။
အိမ်ရှေ့ပေါက်ချိပ်ထား. ..အိမ်လုံခြုံ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2389
aye.kk says: လက်ေဆောင်အတွက်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဆရာခေါင် လက်ရာမြောက်ချက်က ရက်ရက်စက်စက်။ ဒါက စုတ်နဲ့ရေးတာလား။ စိတ်နဲ့ရေးတာလား။
အောင် မိုးသူ says: ကျက်သရေရှိပါ့
ဦးကြောင်ကြီး says: ကိုမိုးတီးပုံဆွဲပီး လော်ဘီမြဆီ သူ့အကောင့်နဲ့ DHL ပို့ပေးပါ ပါပါခေါင်။။
မြစပဲရိုး says: Thanks. But … နာ တို့ဆီမှာ ကြွက် အရှိုဝူး။ :-)))
Mike says: .ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုခေါင်
.ဂုဏ်ယူပါတယ်ပန်းချီဆရာရယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.